गुरुङ सुशान्तको वालबाट
कोरोनाबाट जोगिन सबै उपाय लगाउनुपर्छ। तर, कोरोनाबाट जोगिनु भनेको घरभित्र बसेर सरकारी तमासा हेर्नु होइन।
आपत्विपद्मा सरकारले पनि बहुलाउन पाउनुपर्छ !
झ्याल खोलेर यस्सो बाहिर हे¥यो, मुर्झाएको अनुहार लिएर टोलाइरहेका निरीह प्राणीहरू झ्याल–झ्यालमा देख्छु। बोली हराएको मान्छे साँच्चै निरीह देखिँदो रहेछ।
तपाईंका लागि संसारकै सुखद संयोग यो छ– नेपाल भन्ने मुलुकमा जन्मनुभो र डा. खड्गप्रसाद शर्मा ओलीको जनता हुन पाउनुभो। यो चानचुने प्राप्ति होइन। ‘कम्युनिस्ट’को सरकार आए रुनसमेत पाइँदैन भनेको कसले रे ? आँशु झरुञ्जेल हाँस्ने अवसर सरकारले दिइरहेकै छ।
विदूषकहरूले सत्ताको बजार कब्जा गरिसके। ‘हाइबराहरू’ विचारसहितको आर्ट खोज्दै छन्। हाम्रो युग...।
सत्तासीन नेकपा डबलभित्र चलेको रस्साकस्सीले थप पुष्टि गरेको छ कि यो पार्टी कुनै कोणबाट हेरे पनि कम्युनिस्ट होइन। नत्र गुट भनिएकाहरूको फरक वैचारिक धार हुन्थ्यो होला नि। यत्ति हो– खड्ग ओलीको प्रधानमन्त्रीत्व अहंकारग्रस्त रहेको इतिहासमा लेखिनेछ।
निरन्तर हिँडिरहँदा पनि कहीँ पुगिँदैन भने बाटो बदल्नु उचित हो सायद।
इतिहासमाथि टिप्पणी गरूँ भने केही वर्ष हतार गरेको ठहरिएला भन्ने चिन्ता लाग्छ। मजदुर–किसानको सन्तान परियो, भारदारी इतिहास मण्डलीबाट सीधै खारेजीमा पारिने खतरा त जिउँदै छ। डराउँदै सोध्छु– आजको ज्ञानसत्ता कसको कब्जामा छ ?
ठीकै हो– विद्रोह, आन्दोलन र क्रान्तिबाट राजनेता जन्मिएनन्। रियालिटी सोबाटै काम चलाउनुपर्ने समृद्ध मोडमा आइपुगेका छौँ। निर्णायकहरूलाई सजिलो होओस् भनी एउटा प्रश्न सुझाउँछु– ‘ठेक्कापट्टामा कत्तिको रुचि छ ?’
होम क्वारेन्टिनमा बस्दाबस्दा दिमागमा अन्टसन्ट ‘कविता’ फुर्न थाल्दै छ। लाग्दै छ– यो जगत्मा पाब्लो नेरुदापछिको खत्रा कवि मै हुँ। यस्तो सन्की दाबी मभन्दा पहिले कसैले गरिसकेको त छैन होला नि है !
देशका ठूला पार्टी नेकपा (नेकपा) र नेपाली कांग्रेसले आफ्ना कार्यकर्तालाई कोरोना सन्त्रास घटाउन जिम्मेवार ढंगले परिचालन गर्दा हुँदैन ?हरेक जिल्लामा क्वारेन्टिनसहितको हेल्थ डेस्क खडा गर्नुका साथै सुरक्षित ढंगले सचेतना अभियान सञ्चालन हुन सक्ला नि ?